moeaye's Page - Myanmar Network
moeaye has not received any gifts yet
At 16:27 on November 30, 2011, Myo Myint Kyaw said…
နားထောင်စွမ်းရည်အတွက် Mp3 တစ်ခုလောက်ဆောင်ထားစေချင်တယ်
(၁) အင်္ဂစကားပြောတွေကို စာနဲ့အသံကို ဒေါင်းလော့ဆွဲပြိး ဖုန်း (သို့) နားထောင်လို့ရမယ့် player တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီး တစ်နေ့ ကို အချိန်အနည်းငယ်လောက်ပေးပြီး နားထောင်ပါ။. သူတို့နဲ့ လေယူလေသိမ်းအစ လိုက်ပြောကျင့်ပါ.။
(၂) လေ့လာဖို့အတွက် ဆရာချစ်ဖူးရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုရှာပြိးဝယ်ဖတ်စေချင်တယ် လက်ကိုင်အရွယ်လေးပါ ဈေးလည်းသိပ်မကြီးပါဘူး ၁၀၀၀ နဲ့၁၅၀၀ လောက်ပဲရှိပါတယ် (၂)အုပ်ထွက်ပါတယ် အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်
စသင့်လေ့လာချင်ရင် အလွယ်ဆုံးနဲ့စပါ ။မှတ်မိလွယ်အောင်လုပ်ပါ။ ဟိုစာအုပ်ကကောင်းနိုးနိုး ဒီဟာက ကောင်းနိုးနိုးမလုပ်စေချင်ပါဘူ။ How are you ? ဆိုတဲ့အသံကို လူတိုင်းရင်းနှီးတယ် ဘယ်လိုမေးရင် ဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်
(၃) Grammar ကိုတော့အခြေခံလောက်နားလည်ရင်ရပါပြီ စကားပြောအတွက် အဲ့လောက်မလိုပါဘူး
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို စာအတိုင်းဘာသာမပြန်ပါနဲ့ စကားအတိုင်းဘာသာပြန်စေချင်ပါတယ် (ဥပမာ you....သင် ) အပြင်မှာ "သင်" လို့စကားမပြောကြဘူးလေ (ခင်ဗျား၊နင်) တို့ပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်
အချိန်မပေးနိုင်ရင်တော့ အွန်လိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရမယ့်ဆိုက်တွေရှိပါတယ်
Myanmar Network ဆိုက်မှာလည်း လေ့လာစရာတွေ လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းရှာဖတ်စေချင်ပါတယ်
At 21:26 on June 21, 2011, Mg Kyaw Tint said…
dear elder sister ........... how are you?
At 11:09 on February 5, 2011, Soe Thiha said…